तपाइँको सामग्री मार्केटिंग खेल माथि उठाउने पाँच तरिकाहरू | Martech Zone
तपाईंको सामग्री मार्केटि। खेल माथि बढाउने पाँच तरिकाहरू
मङ्गलबार, अप्रिल 2, 2019 मङ्गलबार, अप्रिल 2, 2019 मार्था जेम्सन
यदि तपाईं कुनै पनि प्रकारको सामग्री मार्केटि inमा संलग्न हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं रणनीति प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यो एक आधिकारिक, योजनाबद्ध, वा प्रभावी रणनीति नहुन सक्छ, तर यो एक रणनीति हो।
सबै समय, स्रोतहरू, र प्रयासको बारे सोच्नुहोस् जुन राम्रो सामग्री सिर्जनामा ​​जान्छ। यो सस्तो छैन, त्यसैले यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ उचित रणनीति प्रयोग गरेर त्यो बहुमूल्य सामग्रीको निर्देशन दिनुहुन्छ। यहाँ तपाइँको सामग्री मार्केटिंग खेल माथि बढाउने पाँच तरिकाहरू छन्।
तपाईंको संसाधनको साथ स्मार्ट हुनुहोस्
सामग्री मार्केटिंग महँगो हुन सक्छ, यसको मतलब यो हो कि तपाईंले सामग्री सिर्जना गर्न आफ्नो समयको एक ठूलो रकम लगानी गर्नुभयो, वा पैसा खर्च गर्नुभयो सिर्जनात्मकमा आउटसोर्सिंग गर्न। सामग्री मार्केटिंग जत्तिकै महँगो चीज बुद्धिमानीपूर्वक निर्देशित गर्नु आवश्यक छ र एनालिटिक्स हेर्नु त्योको एक ठूलो अंश हो।
के तपाईं ती सबै संसाधनहरू राख्ने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ केवल यो पत्ता लगाउनको लागि कि तपाईं फेसबुकमा आफ्नो सामग्री धकेल्दै हुनुहुन्छ जब तपाईंको अधिकांश विपणन ट्राफिक वास्तवमै इन्स्टाग्राम र पिन्टेरेस्टबाट आउँथ्यो? त्यसले पीडा दिन्छ; र तपाई त्यो अनुभव गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्न। तपाईंको सोशल मिडिया एनालिटिक्स हेर्नको लागि केहि समय लिनुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो सामग्रीलाई सही प्लेटफर्म र दर्शकहरूमा निर्देशित गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको टोलीसँग प्राय: भेट्नुहोस्
तपाईंसँग सामग्री मार्केटिंगमा समर्पित टोली हुन सक्छ, वा हुन सक्नुहुन्न। जे होस् अवस्थामा, हप्तामा कम्तिमा एक पटक भेट्नु र तपाईंको सामग्री सिर्जना गर्न र प्रमोट गर्न जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग आधार छुनु महत्त्वपूर्ण छ। यदि सक्नुहुन्छ भने, दैनिक भेट्नुहोस्।
केहि नयाँ कुराको बारेमा कुरा गर्नुहोस् जुन तपाईं पछिल्लो पटक भेट्नुभयो। भविष्यमा हेर्नुहोस् र सहि मानिसहरूमा काम सुम्पनुहोस्। तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू के गर्दै छन् र उनीहरूको सामग्रीमा कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ छलफल गर्नुहोस्।
बोनी हन्टर, मार्केटि blog ब्लॉगर अस्ट्रेलिया २ लेख र WritMyX
यी बैठकहरू पनि तपाईको टाउको एकसाथ राख्नु र केही दिमागमा काम गर्ने उत्तम समय हो। केहि चर्चित ट्रेन्डिंग शीर्षकहरू छन् जुन तपाईंको टोलीले सामग्री निर्माण गर्न सक्दछ?
तपाईंको श्रोता निर्माण गर्नुहोस्
तपाइँको दर्शक वृद्धि मा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। नयाँ कानुनले डिक्टमेन्ट गरीरहेको छ कि डाटा सहमतिबाट जम्मा गर्नुपर्नेछ, जसको अर्थ डाटा स्वेच्छाले छोडिन्छ र फसल तोकिदैन। सामग्री विपणन यो कानूनको आगमनसँगै अझ महत्त्वपूर्ण छ किनभने राम्रो सामग्री मानिसहरूलाई उनीहरूको जानकारी खुशीसाथ हस्तान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने एक उत्तम तरिका हो।
जब व्यक्ति तपाईको सामग्री लाई मन पर्छ, तिनीहरु आफ्नो डेटा को पेशकश गर्नेछ किनकि उनीहरु तपाईको सामानहरु प्राप्त गर्न चाहान्छन्। सोच्नुहोस् कि कति बढी प्रभावी मोडल छ कि कम हेरचाह गर्न नसक्ने व्यक्तिको डेटाको लागि इन्टरनेट स्क्र्यापिंग भन्दा। यसले तपाईंलाई व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध बनाउने अवसर दिन्छ र तिनीहरूलाई तपाईंको सामग्रीसँग जोडिएको महसुस गर्न अनुमति दिन्छ।
बिली बेकर, सामग्री बजारमा ब्रिटविद्यार्थी र नेक्स्टकोर्सवर्क.
तपाईंको श्रोताको व्यक्तित्वलाई हेरेर, तपाईंको नम्बरहरू गत वर्षको तुलनामा जाँच गरेर, र तपाईंको ग्राहक गणना सामग्री विपणन प्रयासहरूसँग सुसंगत छ कि छैन भनेर हेरेर तपाईंको प्रयासहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने तापक्रम लिनुहोस्।
उपयुक्त लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको सामग्री मार्केटिंग लक्ष्यहरू के हो भनेर थाहा छैन भने, कसरी तपाईं तिनीहरूलाई सम्भवतः प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? यी लक्ष्यहरू सेट गर्ने ठूलो अंश तपाईंको विश्लेषकहरूमा आधारित हुनेछ, उदाहरण:
तपाई कुन प्लेटफर्मको लागि लक्ष्यहरू सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाइँ एक बर्षमा कहाँ हुन चाहानुहुन्छ?
के तपाई आफ्ना अनुयायीहरूलाई बढाउन चाहानुहुन्छ, तब कति जनाले?
वा हुनसक्छ तपाई केवल प्रयोगकर्ता अन्तरक्रिया र यातायात बढाउन चाहानुहुन्छ। एक पटक तपाईंको ठूलो वार्षिक लक्ष्य छ, यो समय सानोमा तोड्ने समय हो, अधिक पुग्न सकिने मासिक लक्ष्यहरू। यी तपाईका खुट्टाहरू ढु stones्गाहरू हुनेछन् कि ठूला, बढि लक्ष्य सम्म पुग्न। अन्तिम चरण भनेको ती ठूला लक्ष्यहरूलाई वास्तविकता बनाउनको लागि कुन दैनिक कार्यहरू तपाईंले पछि आउनुपर्दछ भनेर पत्ता लगाउँदैछ।
परिभाषित गर्नुहोस् कसरी तपाईं सफलता मापन गर्नुहुन्छ
तपाईंले आफ्नो सामग्रीको प्रदर्शन ट्र्याक गर्नु पर्छ यदि तपाईं यो जान्न चाहनुहुन्छ कि यो कत्तिको प्रभावकारी छ। के तपाईं हार्ड मेट्रिक्स जस्तै बिक्री र लीडहरू वा नरम व्यक्तिहरू जस्तै सोशल मिडिया प्रयोगकर्ता सment्लग्नता ट्र्याक गर्दै हुनुहुन्छ? केहि मेट्रिक्स जुन तपाई निश्चित रूपमा ट्र्याक गर्न चाहानुहुन्छ उपभोग मेट्रिक्स हुन् (कति व्यक्तिले तपाईका सामानहरू हेरेर वा डाउनलोड गर्छन्), मेट्रिक्स साझेदारी गर्दै, लिड जेनरेशन मेट्रिक्स र बिक्री मेट्रिक्स।
सामग्री मार्केटिंग एक गतिशील गतिविधि हो जुन रणनीति परिवर्तन गर्न इच्छुक हुन आवश्यक छ जब केहि काम गरिरहेको छैन। लक्ष्यहरू हुनु र सफलताको लागि तपाईंको मेट्रिक्स के हो भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ। यो सस्तो पनि छैन, त्यसैले कसरी तपाईं आफ्नो स्रोतहरू निर्देशन दिनुहुन्छ स्मार्ट हो। तपाईंको सामग्री मार्केटि। खेल माथि बढाउन यी पाँच सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्।
टैग: सामग्रीसामग्री मार्केटिङसामग्री मार्केटिंग टीमसामग्री मापनसामग्री संसाधनहरूसामग्री सफलतासामग्री टोली
मार्था जेम्सन एक सामग्री सम्पादक र प्रोफेडरर हो Essayassistant.org र एकेडेमिकब्रिट्स। उनको लेखनको लागि शौक पत्ता लगाउनु अघि मार्थाले वेब डिजाइनर र प्रबन्धकको रूपमा काम गरिन्। उनको शीर्ष प्राथमिकताहरू उनको अनुभव, प्रेरणा र ज्ञान प्रयोग गर्दै छन् ब्लगहरूमा पाठकहरूलाई मद्दत गर्नका लागि ओरिजनराइट्स.